Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အအေးမိခြင်း၊ မတည့်သည်များ ရှူမိခြင်းကြောင့်ချောင်းဆိုးခြင်း
လည်းချောင်းနာခြင်း၊ ခံတွင်းနာခြင်းတိုကြောင့် ခဏတာနာခြင်း၊ စပ်ခြင်းများ
Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Ricolaကို ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းသုံးစွဲပါ။ ဆေးပမာဏမှန်ကန်စေရန် အညွှန်းစာကိုသေချာဖတ်ပါ။
ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းသို့မဟုတ် အညွှန်းစာအတိုင်းဆေးတစ်ပြားကိုပါးစပ်ထဲတွင် ဖြည်းဖြည်းချင်းပျော်ဝင်အောင်လုပ်ပါ။
Ricolaချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးအား မဝါးရ။ တစ်ပြားလုံးမျိုမချရပါ။
Ricolaကိုမည်သည့်အကြိမ်ရေအလိုက် သုံးရမည်ကိုသိရန် ဆရာဝန်အားမေးပါ။ သို့ အညွှန်းစာကိုဖတ်ပါ။
Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Ricolaကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Ricolaကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Ricolaဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Ricolaအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Ricolaတွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
လည်းချောင်းနာခြင်းမှာ ပြင်းထန်ပြီး ၂ ရက်နှင့်အထက် ပိုကြာနေလျှင်၊ ဖျားခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အကွက်ထခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်းတို့ပါ တွဲလာပါက ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းပြပါ။ ပြင်းထန်သောရောဂါတစ်ခု၏ လက္ခဏာများ ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။
အသက် ၆ နှစ်အောက် ကလေးများတွင် ဆရာဝန်မှမညွှန်ဘဲ မသုံးရပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကြပ်၊ Emphysema တို့ကြောင့် နာတာရှည် ချောင်းဆိုးနေလျှင်
အောက်ပါတို့ရှိလျှင် ဆေးရပ်ထားပြီး ဆရာဝန်နှင့်ပြပါ။
၁ ပတ်ထက်ပိုအောင် ချောင်းဆိုးနေခြင်း၊ ပြန်ပြန်ဖြစ်နေခြင်းသို့မဟုတ် ဖျားခြင်း၊ အကွက်ထခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ပါ တွဲဖြစ်လာလျှင်။ ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်သောရောဂါတစ်ခု၏ လက္ခဏာများ ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။
ခံတွင်းမှအနာများ ၇ ရက်အတွင်းသက်သာမလာခြင်း
စပ်ခြင်း၊ နာခြင်း၊ နီခြင်းများပျောက်မသွားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ricolaသည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Ricola က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ricolaသည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပါးစပ်ထဲတွင် ဆေးတစ်ပြားကို ပျော်ဝင်အောင်ငုံပါ။
လိုအပ်ပါက ၂ နာရီခြားတိုင်းငုံနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းလုပ်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်: ပါးစပ်ထဲတွင် ဆေးတစ်ပြားကို ပျော်ဝင်အောင်ငုံပါ။
အသက် ၆ နှစ်အောက်: ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။
Ricola (ရွိုင်ကိုလာ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Ricolaကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Ricolaပူရှိန်းချောင်းဆိုးပျောက် ချိုချဉ် 19 ပြားပါကဒ်
Ricolaမူလသဘာဝအပင်ထွက် ချောင်းဆိုးပျောက်ငုံဆေးပြား ၂၁ ပြားပါကဒ်
Ricolaကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
NATURAL HERB COUGH DROPS. http://www.ricola.com/en-us/Products/Original. Accessed January 14, 2017